Andiam-panafihana atao amin’ny olona LGBTQ + ao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Kely ny fanantenan'ireo niharam-boina tamin'ny fanafihana ho arovan'ny polisy
Voadika ny 15 Jona 2021 4:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, Ελληνικά, Dansk, English
Saripikan'i niiicedave, nampiasana lisansa CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, tao amin'ny Wikimedia Commons
Navoaka voalohany tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra ity. Navoaka etoana indray ny lahatsoratra nasiam-panovana ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny herinandro lasa, nisy fanafihana telo samihafa natao tamin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka ao Azerbaijan. Samy nilaza avokoa ireo niharam-boina fa notafihana izy ireo noho ny fironany ara-nofo.
Ny alin'ny 2 jona no nitrangan'ny fanafihana farany indrindra, raha nisy olona tsy fantatra nanafika pelaka iray tao amin'ny toeram-ponenana Bilajari tao Baku.
Nilaza ilay niharam-boina tamin'ity fanafihana ity, izay nangataka tamin'ny OC Media mba tsy hanambara ny anarany fa nisy olon-tsy fantatra nanaraka azy raha nandeha teny an-dalana izy. Raha ny filazan'ilay niharam-boina dia nilaza taminy ilay olon-tsy fantatra mba “hitondra tena toy ny lehilahy” ary niteny ratsy ny maha-pelaka azy alohan'ny namelezany azy tamin'ny zava-maranitra. Nilaza ilay niharam-boina fa naratra teo amin'ny tanany izy saingy nanohitra izy ka nitsoaka ilay nanafika.
Nilaza ny niharam-boina fa ho any amin'ny polisy izy noho io tranga io.
Fanafihana pelaka iray hafa no nitranga tamin'ny 30 Mey tao amin'ny kianjan'ny Loharano ao Baku renivohitra Azerbaijan.
“Raha iny nandeha iny aho, tampoka teo nobedainy ny tendako ary nasiany totohondry ny faritry ny voako ankavia,” hoy i Herman Turan Javadzadeh, ilay niharam-boina, tamin'ny OC Media. “Tsy hitako ny tarehiny noho ny hatairana. Nitsangana aho niaro tena ary nandositra.”
Nilaza i Javadzadeh fa tsy nankany amin'ny polisy izy. “Roa andro lasa izay,” hoy izy tamin'ny OC Media, “nisy namako iray hafa ihany koa notafihana. Rehefa niantso ny polisy izy dia nilaza taminy ilay polisy fa ‘Raha azoko natao hoy izy dia ny tenako mihintsy no nandoro ny pelaka.”
Tamin'ny 1 Jona, tao amin'ny distrikan'i Yasamal any Baku, nisy roalahy nisaron-tava nanafika olona iray hafa avy amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka, Pariz Abdulayev. Nilaza tamin'ny OC Media i Abdulayev fa natosik'ireo lehilahy izy ary avy eo notatahin'izy ireo tamin'ny famoahan-tavoahangin-divay ny sandriny.
“Raha iny aho nandeha teny amoron-dàlana iny dia nisy tovolahy roa niantso ahy. Niezaka ny tsy hiraharaha aho. Avy eo nanatona ahy izy ireo ary nanomboka nisarika ny lobako. Samy nanao sarontava izy roalahy. Nodarohana aho ary nanomboka nanohitra, ”hoy i Abdulayev. “Tafintohina aho ka nianjera tamin'ny tany. Nandositra izy ireo.”
Nilaza i Abdulayev fa nivarahontsana izy taorian'ilay tranga saingy nihevitra izy fa tsy misy dikany ny fiantsoana polisy.
“Tsy nankany amin'ny polisy aho satria tsy liana amin'izay olana mahazo anay [mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka] izy ireo. Rehefa manatona azy ireo izahay dia mametraka fanontaniana manokana tsy misy ifandraisany amin'ilay zava-nitranga izy ireo,” hoy izy.
Zeorzia 1 herinandro izay
Azerbaijan 1 herinandro izay